बैतडी, २५ चैत : मातृमृत्यु र बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउनका लागि गर्भवती महिलाको नाम दर्ता गराउने र उनीहरुलाई एसएमएसमार्फत नै गर्भजाँच र सुत्केरीका लागि निम्तो दिन थालिएको छ ।
मातृमृत्यु र बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउनका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन रहेका स्थानीय तहमा कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा जारी रहेको छ । मेडिक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम नेपालमा सन् २०१३ मा बाग्लुङमा पाइलटिङकारुपमा शुरु गरिएको थियो । सन् २०१५ मा मात्र बाग्लुङ जिल्लाभित्र पूर्णरुपमा विस्तार गरी त्यसपश्चात् गोरखा, धादिङ, इलाम हुँदै यो वर्षदेखि बैतडीमा पनि शुरु गरेको हो ।
प्रकाशित : आइतबार, चैत २५, २०७४०९:०९
लुगामा आइरन लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर अमेरिकाको मृत्यु
सावधान ! छाला क्यान्सरका देखिन्छन् यस्ता साना-साना लक्षण, समयमानै थाहा पाईराख्नुस् !
तीन पटक टाउकाको शल्यक्रियाका कारण जिउँदो शहिद मुकेशको अवस्था झनै नाजुक बन्दै !
डेढ महिनादेखि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको सडक अझै पनि खुलेन !